सञ्चारमन्त्रीको प्रश्न- टेलिफोनको टावरमाथि बम प्रहार गर्ने कुरा बहादुरी हो भनेर लेख्ने कुन पत्रकारिता हो ? - Nepal Post Daily
सञ्चारमन्त्रीको प्रश्न- टेलिफोनको टावरमाथि बम प्रहार गर्ने कुरा बहादुरी हो भनेर लेख्ने कुन पत्रकारिता हो ?
चौतर्फी रुपमा गुनासो आएपछि बीरगन्ज महानगरपालिकाले सम्पत्ति करको दर घटायो
प्रहरीकै संरक्षणमा पर्साको गादी खोलाबाट अबैध रुपमा बालुवा,गिट्टीको उत्खन्न
बालिकालाई करणी गरी आत्महत्या गर्न बाध्य गर्ने युवकलाई कारबाहीको माग गर्दै स्थानीयहरू
फेरि हवाई भाडा बढ्यो
बीरगन्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कम्पनी लिमिटेड र हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गरिने
मेघगर्जन र चट्याङसहित देशभर वर्षाकाे सम्भावना
चितवन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रायोजित आन्दोलनको कुनै ओखती नहुने टिप्पणी गरेका छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन गरिरहेको छ । मन्त्री बास्कोटाले भने कोही मानिस कुरै नबुझी दौडिरहेको बताए । नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार कार्यालय सौराहाको फाइवर टु द होम सेवाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री बास्कोटाले प्रेसका नाममा छाडातन्त्र स्वतन्त्रताको नभएको बताए ।
सरकार प्रेसप्रति पूर्वाग्राही नभएको स्पष्ट गर्दै उनले विधेयक ल्याउँदा विदेशी र स्वदेशी प्रचलनसमेत हेरिएको बताए ।
अमेरिकामा पनि एक करोडसम्मको जरिवाना हुने गरेको छ भन्दै उनले आतङ्कवादलाई संरक्षण गर्दै लेखेमा मृत्युदण्ड समेत दिइने गरेको बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘टेलिफोनका टावरमाथि बम प्रहार गर्ने कुरा बहादुरी हो भनेर लेख्ने कुन पत्रकारिता हो ? ‘ यस्तो पत्रकारिता हो कि पत्रकारिताको खोल ओढेको आतङ्कवादको संरक्षक हो वा प्रचारक हो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले आतङ्कवादी गतिविधिलाई प्रेस स्वतन्त्रताको ढालले रोक्न नमिल्ने बताए ।
समाचार लेखेर कोही पनि पक्राउ नपर्ने भन्दै उनले संसदमा दर्ता भएका र हुन लागेका कानून अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्दा त्रुटि देखिए सच्याउन सिकने बताए ।
तर मनमा अरू नै कुरा राखेर चलाइएको होहल्लाबाट प्रभावित हुन नसक्ने बताउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘बहिष्कार आदि इत्यादिको अर्थ छैन । सत्ता लुछेर, कु गरेर आएको चिज होइन । यो जनताद्वारा निर्वाचित सरकार हो ।’
संवाद भने जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘सत्ता हेरेर कानून बन्दैन, लोकतन्त्र हेरेर कानून बन्नुपर्छ, संविधान हेरेर कानून बन्नुपर्छ ।’
Previous articleआगलागीमा परेर सल्यानमा ३ जनाको मृत्यु
Next articleठोरी स्वर्ग जस्तै रहेछ प्रमुख विजय कुमार सरावगी ( भिडियो सहित )
संघीयता र संविधान कार्यान्वयनका लागि साट वटै प्रदेशलाई एक जुट हुन मुख्यमन्त्री राउतको आग्रह
जनकपुरधाम बनाउन सबै एक हुनुपर्ने – मन्त्री चौधरी
बीरगन्जबाट २ सय ७० किलोग्राम गाँजासहित २ जना भारतीय नागरिक पक्राउ
जनकपुरमा ८ बिगाहा सरकारी जग्गा भोगचलन प्रकरणमा ३० जनालाई हाजिर हुन अख्तियारको निर्देशन
सांसद डीला संग्रौलाको प्रश्न, ‘किसानले मल कहिले पाउँछन् ?’
गृहमन्त्रीले भने – ‘महिलामाथि बढ्दै गएको हिंसा रोक्न कानुन बनाउनु परेको हो’
चितवन ट्रायल सेन्टरको सबै काम रोकन सर्वेच्चको आदेश
संघीयता र संविधान कार्यान्वयनका लागि साट वटै प्रदेशलाई एक जुट हुन...
समाचार July 7, 2022